Kanjani ngokushesha ukwelapha emphinjeni, besebenzisa izindlela ezilula kakhulu futhi kungase kutholakale?
Kanjani ngokushesha ukwelapha emphinjeni? Lo mbuzo kaningi ebuzwa odokotela iziguli zabo. Nokho, impendulo kungenzeke iqukethe eziningi kakhulu izincomo, ezifaka hlangana ukuhlahluba reception kwemithi, futhi ukusetshenziswa imali yomphakathi. Ayikho ezithakazelisayo kancane umbuzo kanjani ngokushesha ukwelapha emphinjeni ekhaya.
Namuhla sanquma ukunikezela isihloko kuyinto izindlela athandwayo. Ngemva yonke imithi ukuqeda izimpawu ezivamile abandayo may udokotela kuphela. Ngaphezu kwalokho, kuba ngokuphelele yonke imithi inemiphumela yabo nemiphumela kanye contraindications. Yingakho ukuqedwa izifo kungcono ukusebenzisa izindlela non-bendabuko. Nokho, lokhu kufanele kwenziwe kuphela kulezo zimo, uma une imikhuhlane ezivamile, wabe ngaphandle nanoma yiziphi izinkinga.
Kakhulu emphinjeni: kanjani ngokushesha ukuphulukisa uhlambulule
I wethule indlela iye yakufakazela kakhulu omuhle side, hhayi kuphela e yendabuko kodwa futhi osebenzisa imithi. Ukuqeda lesi sifo, kufanele kube nsuku zonke ukuhahaza nge ezihlukahlukene Iziphungo herbal (oregano, chamomile, nokunye. D.) Futhi infusions. ukusiza kanye nosawoti izixazululo ne ukwengeza baking soda futhi amaconsi ambalwa iodine. Kodwa ukuze senze umphumela ephawuleka ngempela, ukusetshenziswa izikhungo ezinjengalezi kufanele kube izikhathi okungenani 6-8 ngosuku.
Ukusetshenziswa zokwelapha imuncwe
Indlela ukwelapha emphinjeni ngosuku? Lokhu kuzokusiza umcimbi imuncwe ephelele. Ukuze wenze lokhu, ungasebenzisa ebhodweni ezijwayelekile umhluzi, namadivayisi ekhethekile okuthiwa nebulizers. Bona zingafakwa amakhambi ezifana esikweyoku, calendula, chamomile futhi zikagamthilini, kanye amanye amakhambi.
Kanjani ngokushesha ukwelapha emphinjeni, usebenzisa okugeza unyawo
Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela kuhle silondoloza kuzo zonke izimpawu catarrhal. Ngemva izinyawo Ziningi amaphuzu reflex. Ukuze isebenze kuzo, kutuswa ukugeza nge lwesinaphi imizuzu 20-25. izinyawo Landelayo kufanele omisiwe futhi agqoke uvolo amasokisi. Le nqubo kumele kwenziwe ngaphambi nje kokuba balale.
umzimba deda namafutha
Indlela ephumelelayo ukwelapha emphinjeni kubhekwe unyawo zokugeza hhayi kuphela, kodwa yima bese trituration usebenzisa yokugcoba ezifana "Gold Star". Futhi leli thuluzi singasebenza esifubeni, kodwa ngemva kwalokho isiguli kufanele qiniseka qedani ngengubo efudumele.
Ukwelashwa nokuvikelwa umkhuhlane ngaphakathi
Ukucabanga ukuthi ngokushesha ukwelapha emphinjeni, kufanele uyakhumbula ukuthi imbangela eyinhloko imikhuhlane lehliselwa amasosha omzimba. Yingakho kunconywa ukuthatha ejenti ngokuya aqinisayo ayekulezo namavithamini. Lokhu kungenziwa hhayi kuphela ngosizo imikhiqizo zemithi, kodwa futhi ngokudla ukudla aqukethe inani elikhulu macro- futhi ukulandelela izakhi kanye nezinye izinto ewusizo (lokhu izithelo ezisawolintshi, ama-raspberry, currants abamnyama, uju, Vitamin itiye nokunye.).
Retrotserebellyarnaya simila zobuchopho: isifo emitholampilo kanye nokwelashwa yayo
Ukushoshozela esifubeni ngemuva kokubeletha
Ukwandiswa prolactin: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, imiphumela
Izimbangela nomfutho wegazi ophezulu: ozinikela sokukhathazeka?
A ezihlukahlukene izitshalo. Uyini ukwehluka nezitshalo
Kanjani ukuze ubuyisele oxhumana nabo "Android". Phinda SMS asusiwe, izicelo kanye izilungiselelo ifektri kwi "Android"
Zomculo isi-Japanese (isithombe)
Tonic. Yini osebenza ku iziphuzo ezibandayo? UMthetho ku iziphuzo energy. tonics okungezona notshwala
Uhlobo luni lwe-TV ye-satellites okufanele lukhethe ukujabulela ukubuka?
David Duchovny: Filmography. uchungechunge Kuhle nama-movie Devidom Duhovny